UkuPhuhliswa kwesoftware yokuNxweme kuchaziwe | XperimentalHamid
Ukuphuhliswa kwesoftware engaqeshwanga kuchaziwe
Matshi 6, 2020 by Qasim Khan
Ngaphambi kokuxoxa Uphuhliso lweSoftware yaselwandle lets ukuxoxa malunga nophuhliso lwe isoftwe. UkuPhuhliswa kwesoftware yinkqubo entsonkothileyo ebandakanya ukucinga ngombono malunga nemveliso yesoftware enokuba sisicelo, icandelo lesoftware okanye isakhelo. Njengoko umbono uqaliwe emva koko inyathelo elilandelayo lichaza iinjongo kunye neemfuno, elandelwa yoyilo, ukufaka iikhowudi, ukubhala kunye nokuvavanya, emva koko kuyeza umsebenzi wokulungiswa kwe-bug. Kuthetha ukuba maninzi amanyathelo abandakanyekayo phakathi kokumitha umbono nokuwunika ukubonakaliswa kwemveliso yesoftware.
Inkqubo yokuphuhliswa kwesoftware ibandakanya umsebenzi onzima wokwenza uphando, ukuqhuba uphuhliso, ukuza nomzekelo, ukuguqulwa, ukuguqula kwakhona, ukuphinda uphinde usebenze, kunye nokugcina isoftware.
La manyathelo adinga umgca wokudibana kweengqondo ezahlukeneyo, kunye nobuchule obahlukeneyo bokuguqula umbono oqinisekileyo ube yimveliso ebonakalayo. Ukudibanisa, ukukhulisa, kunye nokugcina indawo enjalo yeengqondo ezinobuchule zifuna izixhobo kulawulo, ekusebenzeni nakwimicimbi yezemali. Oku kukhokelele iinkampani ukuba zikhuphe umsebenzi wophuhliso lwesoftware kwezinye iinkampani nabantu, uninzi lwazo lusebenza ngaphandle kwemida yendawo yenkampani. Le ndlela ibizwa ngokuba luphuculo lwesoftware elunxwemeni.
Ngaba kwenzeka njani ukuba kuphuculwe isoftware elunxwemeni?
Lwenziwa njani uphuhliso lwesoftware elunxwemeni?
Yintoni ebangela uphuhliso lwesoftware elunxwemeni lube lunqweneleka ngakumbi?
Uphuhliso lweSoftware ePhandle: Konke kulungile?
Ukuphuhliswa kwesoftware engaphesheya kuyeyona nto iyintandokazi kwiinkampani ezisebenza kwicandelo eliphuhlileyo lomhlaba. Ukhetho lwenziwe lula kukuphuhliswa okukhulu kwicandelo lobuchwepheshe, elikhuthaza ngakumbi ngokudibana kunye nokunxibelelana kwehlabathi jikelele, apho ukuhamba kolwazi kuye kwaba lula ngokungazinzanga ngokufumaneka konxibelelwano oluthembekileyo noluthembekileyo. Ndiyabulela kubuchwepheshe kunye ne-intanethi, ayisiyonto engenakwenzeka ukuphatha ishishini naphi na emhlabeni ukusuka nayiphi na indawo.
Umxholo wophuhliso lwesoftware eluntwini uqondwa ngabantu kunye neenkampani ngeendlela ezahlukeneyo. Ukukhutshwa kophuhliso lwesoftware kwenziwa ngokunika iprojekthi kumntu ngamnye okanye kwiarhente. Olu khetho lwenziwe ngokufanelekileyo lufanelekile kukuba nokuba iprojekthi yonke okanye inxenye yayo inokunikezelwa kwinkampani elunxwemeni. Konke oku kunokwenziwa ngokuqesha umntu okanye iqela elizinikeleyo labaphuhlisi besoftware nakweyiphi na indawo yehlabathi.
Okokuqala, amandla okuqhuba kwimpumelelo kunye nokuphunyezwa kwehlabathi kuphuhliso lwesoftware elunxwemeni ebekujongwa kuzo zoqoqosho kunye nokwahlulahlula. Ukuzisa isoftware elunxwemeni yinkampani ebambiseneyo kunciphisa iindleko zokuphuculwa kwemveliso kunye nokuvavanywa ukuba inkampani ebambisanayo iyasebenza kwilizwe elisaphuhlayo. Ukuvela kwamazwe afana neIndiya, Philippines, neRomania njengamaziko aphambili okuphuhlisa isoftware kuyawomeleza lo mbono, apho indleko zabasebenzi zininzi kakhulu zibephantsi kwamazwe okufika afana neNtshona Yurophu noMntla Merika.
Okwesibini, ngokukhetha uphuhliso lwesoftware kude kunkampani okanye umntu afikelele kwezona zingqondo zilungileyo zeprojekthi yesoftware naphi na nangaliphi na ixesha. Aba bantu kunye neenkampani zinobuchule kwaye zinobuchule njengakwenye indawo. Kwangelo xesha, abantu abasebenza kwiinkampani ezingaselunxwemeni baye baziwa banobungcali kwindawo enye, ebanika umda ekwenzeni imisebenzi ngcono kunabanye ngexesha elincinci.
Okwesithathu, xa ukhetha ukhetho lophuhliso lwesoftware, inkampani inokuphelisa uxanduva lolawulo nolawulo malunga nokuqeshwa kwabasebenzi, uqeqesho lwabo kunye nolawulo, ukongamela, kunye nolawulo. Oku kuthetha ukuba akukho nto ixhala malunga nokusebenza kunye neendleko zolawulo, indawo yeofisi kunye nokuthengwa kwezixhobo kunye nolungiselelo, njl.
Okokugqibela, inkampani okanye umntu lowo umsebenzi wophuhliso lwesoftware ekhutshelwe ngaphandle wabelana ngoxanduva lomngcipheko onxulumene nomzamo. Ngale ndlela oku kongeza olunye uluhlu lolawulo oluvela kwenye inkampani ukulawula kunye nokunciphisa umngcipheko kunye nokuqinisekisa ukugqitywa ngempumelelo kweprojekthi yokuphuhliswa kwesoftware. Oku, kongezwe yimihla ebekiweyo kunye neengxaki zexesha ekuxoxiswene ngazo phakathi kweenkampani kunye nabantu abathile kuyakhawulezisa kwaye kusebenze inkqubo.
Njengayo nayiphi na enye into yokunxibelelana okukude, uphuhliso lwesoftware elunxwemeni luza nomthwalo wayo wezinto ezingeloncedo. Olona lubonakalayo kunxibelelwano. Ngenxa yomahluko wexesha, imiba ye-bandwidth, kunye neeyure zomsebenzi ezahlukeneyo zokucothisa unxibelelwano oluphambili konke akunakuphepheka. Oku kwenza ukubek'esweni nokusombulula ingxaki ngongenelelo lwamaxesha ngamaxesha angalunganga. Ukongeza, izithuba ezikhoyo phakathi kwamazwe zinokulinciphisa inqanaba lokuthetha ngokungafihlisiyo kunye nezimo zengqondo ezinobuhlobo, eziyimfuneko ekusetyenzeni komsebenzi kunye nonxibelelwano olusebenzayo.
Ezinye izinto ezigwenxa eziqwalaselwe kwindawo yophuhliso lwesoftware ziquka umba wokhuseleko lwedatha. Umngcipheko wobuqhetseba kunye nokuqhekeza uyanda xa idatha enobuzaza inikezelwa kwiinkampani ezikude nakubantu bokwenza iprojekthi. Okokugqibela kodwa kungabi nakancinci ukuncitshiswa kwendleko akusoloko kuqinisekisa umgangatho wokuhanjiswa komsebenzi. Ukugcina iindleko kuncitshisiwe kungakhokelela inkampani ekuqeshiseni amaqela aneentliziyo ezibopheleleyo kunye nezakhono ezingaphuhliswanga, ukuthatha iprojekthi iye ezinjeni.
Ukuqukumbela, ukuphuculwa kwesoftware iyeyona nto iphambili yokusebenzisana kunye nenkcubeko kunye nokudityaniswa kwezorhwebo, kuqinisekiswa ngonxibelelwano oluqhubekayo oluphucula iindlela zonxibelelwano kwihlabathi lanamhlanje. Isibonelelo sokukhetha iphuli eyahlukeneyo yabaphuhlisi abanobuchule ngeendleko eziphantsi kwaye kwangaxeshanye bangaxhalabi malunga nolawulo, imali, kunye nemithwalo yokusebenza iye yatyhalela amaziko kunye nabantu abavela kwihlabathi eliphuhlileyo ukuba bajonge ngaphandle, ngelixa ukwahlulwa kwezoqoqosho kunye nokusilela amathuba kwiimarike zalapha kumazwe asakhasayo azenze zajonga kwilizwe eliphuhlileyo.
Nantsi i ikhonkco elifanelekileyo lokufunda
iindidi imveliso Post yokukhangela
Amehlo obumnyama iphepha 312
Ukuphuhliswa kwesoftware yasentshona kuchaziwe